Ukuwa | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Bona kwaye wenze » Utsalo lwezotyelelo » Iindawo zenkcubeko nezembali » Ukuwa
UAlbert Engström wayengomnye wabona bantu babalaseleyo kwinkcubeko kwimbali yaseSweden. Wayengumculi, umbhali kunye nekhathuni.
UAlbert wazalwa nge-12 kaMeyi, ngo-1869 kwifama iBäckefall kwiParishi yaseLönneberga. Ikhaya lakhe lobuntwana, libekwe kwindawo exabisekileyo yezolimo. Ndwendwela ifama apho wazalelwa khona u-Albert Engström. Emyezweni kukho intsalela yelitye lesikhumbuzo.
Amaxesha amabi akhokelela ekubeni bathengise ifama. Utata uthathe isikhundla kuloliwe waseNässjö-Oskarshamn. Isikhundla sakhe yayiseso somphathi wesikhululo eBohult. Emva kweminyaka embalwa wanyuselwa waba ngumhloli wesikhululo (stins). Ngeli xesha kuHult apho usapho luhleli khona ngokulungileyo.
U-Engström wafunda ubugcisa noCarl Larsson njengotitshala. Uya kuthi emva koko abe ngomnye wabapopayi abahlekisayo bexesha lakhe. Wayesebenza njengomhleli kunye nombhali. Ngo-1922 wanyulwa kwisikolo i-Swedish Academy esihlalweni no 18. Ngo-1927 waba ngugqirha obekekileyo wefilosofi e-Uppsala kunye no-Bruno Liljefors
U-Albert Engström usweleke ngo-Novemba 16, 1940. Wayeneminyaka engama-71 ubudala. Ungcwatyelwe emangcwabeni eHults.
Olunye ulwazi malunga no-Albert Engström lunokufundwa apha Umbutho ka-Albert Engström
Bäckefall 2, 577 94 ILönneberga